Barxadda Buttercream Cake Casharka leh Afka Sharta Buttercream - Video Bilaash Ah
Sidee loo sameeyaa keega laba jibbaaran oo laba jibbaaran oo leh geeso aad u fiiqan iyo geesaha buttercream ee aan hoos u dhicin oo aad u fiiqan
Been sheegi maayo, waxaan necbahay samaynta keega laba jibbaaran! Waqti badan ayey qaadanayaan waxayna u baahan yihiin geeso badan oo fiiqan iyo xariiqyo toosan. Marka aniga maahan waxkeygu! Laakiin dabcan, mararka qaarkood keega laba jibbaaran lama dhaafi karo.
Kani waa nidaamkeyga sameynta keega laba jibbaaran iyada oo aan lagu dhex dumin barkadda ilmada.
Geesaha toosan, geesaha fiiqan, jahwareerka ugu yar.
heerkulkee ayaad dhalaalisaa shukulaatada
Qalabka samaynta keega laba jibbaaran
* Qoraalkani wuxuu kakooban yahay xiriiriyeyaal xiriir la leh taas oo macnaheedu yahay in la i siin karo xoogaa dinaar ah markii la iibsado. Tani saamayn kuma yeelanayso qiimaha adiga.
Xoqlaha Bench leh gacan qabsi leh
Spatula oo ah 'Offset spatula'
Kordhi ujawaab (ama loox weyn ama keeg
Khudaarta oo gaabinaysa
Sabuuradda keega (Waxaan isticmaalayaa 1/4 xaashi oo aan u goynayo 6 ″)
Keega horay loo dubay oo la qaboojiyey
Waan ogahay inay jiri karaan qaar ka mid ah dadka aqrinaya tan oo aan xirfad u lahayn qurxinta keegga, marka waxaan isku dayayaa oo aan u kala jabinayaa macluumaadkan cusub ee cusub. Markii ugu horreysay ee aan bilaabayay qurxinta keega waxaan helay wax aad looga xumaado oo aanan ka helin wax macluumaad ah oo ku saabsan sida loo barto farsamooyinka cusub sida sameynta keega laba jibbaaran.
Hubaal, haddii aad sidan ku samaynaysay sannado sannado ah rootida rootida, uma baahnid inaad sameyso habkan. Laakiin ka warran haddii ay tahay markii kuugu horreysay? Ama ka warran haddii aad dhibtoonayso oo aad u baahan tahay qorshe cusub oo weerar ah oo loogu talagalay keeg soo socda.
karinta keega qumbaha koonfureed laga soo bilaabo xoq
Sida loo dhaxan oo loo buuxiyo keega laba jibbaaran
Ku bilow inaad dubto keegaaga, aad isku karijiso oo aad jarjartid haddii aad rabto. Ku xoq boodhka keegaga 4 ″ x6 ″ laba jibbaaran adoo adeegsanaya taliye iyo daab x-acto ah. Kadib isku xoq oo buuxi keegaaga oo jajabi jajab.
Waxaan jeclahay inaan keegayaga ku kariyo qaboojiyaha habeenka maxaa yeelay inta badan waan kariyaa, qabow, dhaxan, waan buuxiyo oo waan qaboojiyaa hal maalin laakiin sidoo kale waad barafoobi kartaa saacad ama sidaas haddii aad deg deg tahay. Ha barafoobin adag. Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeri ah oo ku saabsan isku-darka iyo buuxinta keega, ka fiiri fiidiyowgeyga bilowga ah sida loo sameeyo keegaaga ugu horeeya .
Marka keegaaga laba jibbaaran la qaboojiyo, waxaad bilaabi kartaa howsha dhisidda geesahaas fiiqan.
Ku xoq qadar yar oo ah khudradda gaagaaban oo ku dhejinaya qalabka wax lagu beddelayo oo ku dul wareegaya u jeedka dushana dul dhigo xaashi yar oo xaashi ah.
Ku faafi xitaa lakab ah buttercream dusha sare ee warqadda soo dejisan qiyaastii 1/2 ″ qaro weyn
Dhig keeggaaga la qaboojiyey, kor iyo hoos-u-dhig, dusha maraqa subagga. Riix si aad u hubiso inaad xiriir wanaagsan ka leedahay dhinacyada oo dhan iyo biyo-mareenka.
Ikhtiyaar: U adeegso heer si aad u hubiso in keeggaagu uu siman yahay (fiiri fiidiyaha)
Dhis dhinacyada dhinacyada keegaaga oo leh buttercream
Ku xoq xaddiga xadhiggaaga ku xoq. Aad ayey muhiim u tahay in kursigaaga wax lagu xoqo uu ku xoqnaado dhanka leexashada si looga fogaado in shilalka loo laalo dhinacyada. Tani waa sababta aan u doorbido xoqeyaha keydka ATECO.
Sifee geesaha adoo keenaya xoqeyahaaga keydka geeska isla markaana dib ugu xoqaya bartamaha keega. Ku celi gees walba.
Qabooji keega oo dhan qaboojiyaha ilaa 15-20 daqiiqo
Sida loo helo geesaha fiiqan keegaaga laba jibbaaran
Ka dib markii keegaaga laba jibbaaran la qaboojiyey, dib u rog. Ha welwelin, tani ma dhaawaceyso keega.
Ka qaad fidiyaha u jeedsada iyo warqadda soo dejisan
Ku nadiifi geesaha diiran kursiga-xoqidda. Kaydkeyga waxaan hoos dhigay biyo kulul ka dibna ku qallaji tuwaal. Gudbinta kama dambaysta ahi waxay jilcisaa wax kasta oo goobooyin ah waxayna nadiifisaa geesaha xunxun.
Hadda keegaaga laba jibbaaran ayaa diyaar u ah in lagu dhejiyo, si loogu daboolo jacaylka ama kaliya loo qurxiyo!
cuntada sanduuqa jilicsan ee jilicsan ee jilicsan
Been sheegi maayo, hawshani waqti ayey qaadaneysaa laakiin ugu yaraan dhammaadka howsha, waxaad leedahay keeg laba jibbaaran oo fiican!
Ma u baahan tahay muuqaallo dheeri ah? Ka daawo fiidiyowgayga sida loo sameeyo keeg laba jibbaaran oo leh geesaha buttercream fiiqan.
malab rootiga oo dhan rootiga gacanta gacanta
sida loo basbaas dhafo keega la kariyey
sida loo sameeyo ganache aan lahayn kareemo culus
sida loo sameeyo shukulaatada moodeelka oo aan lahayn sharoobada galleyda